Kedu otu anyị ga-esi kwekọọ ọbụbụeze Chineke na nnwere onwe ime nhọrọ? | Ahụrụ m Jizọs n'anya
Gịnị bụ osisi nke ndụ n’ime Akwụkwọ Nsọ?
A na-eji nnụnụ eme ihe dị ka akara Ndị Kraịst
Duzu ati a Baebolo ne foa bie azo nvasoɛ ɛ?
Oge Chineke na ndu anyi?
Jisos n’agha gi, gini ka imere ya?
Okwukwe na Egwu Fear Nwere Ike Ibikọ?
Akwụkwọ Nsọ: ihe iwu iri a pụtara